सामाजिक मिडिया के हो? किन कम्पनीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ?
B2C र B2B व्यवसायहरूमा सामाजिक मिडियाको प्रभाव वा प्रभावको अभावको बारेमा धेरै कुराकानी छ। यसको धेरै जसो एट्रिब्युसनमा कठिनाईको कारण डाउनप्लेड छ विश्लेषण, तर यसमा कुनै श people्का छैन कि व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालहरू खोजी र सेवाहरू र समाधानहरूको खोजी गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? अहिले नै फेसबुक हेर्नुहोस् र सामाजिक सिफारिशहरूको लागि सोध्ने व्यक्तिको लागि ब्राउज गर्नुहोस्। म तिनीहरूलाई हरेक दिन देख्छु। वास्तवमा उपभोक्ताहरू सामाजिक मीडिया रेफरलको आधारमा खरीद गर्ने संभावना %१% बढी हुन्छ।
पछिल्लो केहि बर्षहरु मा व्यापार मा सामाजिक मिडिया परिपक्वता संग, धेरै B2B संगठनहरु लाई प्रदान गर्न सक्दछ सही मूल्य को महसुस गर्दै छन्। चाहे तपाइँ सोशल मिडियाको उपयोग उत्पादनहरु लाई सिधा बेच्न मद्दत गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ वा यसलाई तपाइँको नेतृत्व उत्पादनको प्रक्रियाको एक टुक्राको रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण लिनुभयो जुन तपाइँको समग्र मार्केटिंग रणनीतिमा सामाजिक मिडियालाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्दछ तपाइँले नयाँ व्यवसाय उत्पादन गर्ने उत्तम अवसर दिनुहुन्छ। स्टीफन तामलिन, आउट युरोप
कुन Social सामाजिक मिडिया रणनीतिहरू तपाइँको व्यवसाय कार्यान्वयन हुनु पर्छ?
सुन्दै - सम्भाव्यता र ग्राहकहरूलाई अनलाइन प्रतिक्रिया गर्न सामाजिक मिडियालाई निगरानी गर्नु उनीहरूसँग विश्वसनीय सम्बन्ध सिर्जना गर्न अविश्वसनीय माध्यम हो। यो तिनीहरूमा सिधा तपाइँसँग बोल्दै सीमित हुनु हुँदैन। तपाईं आफ्नो कर्मचारीहरूको नाम, तपाईंको ब्रान्ड, र तपाईंको उत्पादन नाम को कुनै उल्लेख को लागी सुन्नु पर्छ। यसले तपाईंलाई बिक्री-सम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिन, तपाईंको अनलाइन प्रतिष्ठालाई सुरक्षित राख्न, र तपाईंको सम्भावना र ग्राहकहरूको साथ विश्वास जगाउँदछ कि तपाईं कम्पनीको प्रकार हुनुहुन्छ जुन दुबै ख्याल राख्दछ र सुन्नुहुन्छ। % 36% मार्केटरहरूले # ट्वीटरमा ग्राहकहरू अधिग्रहण गरेका छन्
सिक्ने - owners२% व्यवसाय मालिकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई #Facebook मा फेला पारेका छन् र% 52% व्यवसाय मालिकहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई # लिंकन्डेइनमा फेला पारेका छन्। ती समुदायहरूमा सामेल हुदै, तपाईं उद्योग नेताहरू, सम्भावित ग्राहकहरू, र तपाईंको आफ्नै ग्राहकहरू सुन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईंको ईन्डस्ट्री भित्र के मुख्य मुद्दाहरू छन् के भन्ने बारे। यसले तपाईंको कम्पनीलाई ती उद्योगहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न दीर्घकालीन रणनीतिहरू विकास गर्न मद्दत गर्दछ।
संलग्न गर्दै - यदि तपाईं केवल बोल्दा बोल्नुहुन्छ, वा त्यहाँ बिक्री अवसर छ भने - तपाईं कस्तो प्रकारको कम्पनी हुनुहुन्छ भन्ने झलकको साथ सोशल मिडिया प्रदान गर्नबाट हराउनुहुन्छ। क्युरेटिंग सामग्री र तपाइँको सम्भावना र ग्राहकहरु लाई चासो को लेख साझा गर्न को लागी उनीहरु संग विश्वास र अधिकार निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईंको ग्राहकहरूलाई सफल हुन मद्दतले तपाईंको सफलता सुनिश्चित गर्दछ, केवल तिनीहरूको होइन!
प्रमोशन गर्दै - तपाईंको पहुँच, तपाईंको नेटवर्क, र तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूको बृद्धि बढाउनु सन्तुलित सामाजिक मिडिया रणनीतिको अंशको रूपमा आवश्यक छ। तपाईं जहिले पनि आफूलाई बढावा दिन चाहनुहुन्न, तर तपाईंले ती अवसरहरू अनलाइन हटाउनु हुँदैन। Media०% भन्दा बढी विक्रेताहरू सामाजिक मिडियाको कारणले दुईदेखि पाँच डिल बन्द गरेका छन्
टैग: २०१ social सामाजिक मिडिया व्यापार तथ्या .्कव्यापार सामाजिक मिडियाखरीद निर्णयगुगल प्लस ब्यापारका लागिगुगल + व्यवसाय को लागीकसरी सामाजिक मिडिया तपाइँको व्यवसाय लाई मद्दत गर्न सक्छकसरी सामाजिक मिडिया व्यापार लाई मद्दत गर्दछब्यापारका लागि लिin्कडिनबिक्री बन्द हुन्छबिक्री मान्छेव्यवसाय को लागी सामाजिक मिडियासामाजिक मिडिया प्रभावसामाजिक बिक्रीसामाजिक बिक्रीव्यापार को लागी ट्विटर
कसरी मोबाइल वालेट ड्राइव बिक्री प्रस्ताव गर्दछ
डिसे 1, 2015 मा 12: 09 AM
अचम्मको लेख डगलस! तपाईंले दिनुभएको यी सुझावहरू तपाईंको व्यवसायको अनलाइन विज्ञापन गर्दा लागू गरिनुपर्छ। पोस्ट गरेर पुग्दैन। तपाईंका श्रोताहरू सुन्नु र तिनीहरूसँग संलग्न हुनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि तपाईं तिनीहरूको रुचिहरू जान्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाइँ उनीहरूको रुचि थाहा छ भने, तपाइँ तपाइँको लक्षित ग्राहकहरु लाई पहिचान गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। धेरैजसो मार्केटरहरूले सोशल मिडिया मार्फत फेला पारेका ग्राहकहरूको कारणले सफल व्यवसाय छ। यो धेरै जानकारीमूलक पोस्ट को लागी धन्यवाद!
डिसे 17, 2015 मा 1: 37 AM
पक्कै पनि यी कुराहरू कार्यान्वयन हुनेछ। मेरो मतलब, म मेरो मार्केटिङ अभियान को एक भाग को रूप मा सोशल मिडिया को उपयोग गर्दै छु र यसको लागि सही रणनीतिहरु संग, अहिलेसम्म, यो व्यापार को लागी राम्रो गरिरहेको छ। तर म आफैलाई सीमित गर्दिन त्यसैले तपाईको यो पोस्टले मलाई यस प्रकारको रणनीतिमा अझ राम्रो गर्न मद्दत गर्न सक्छ।